UBUNGAKANANI BOKUHLAMBA (ISIKHOKELO SOMLINGANISO WEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ubungakanani bokuhlamba (Isikhokelo soMlinganiso wegumbi lokuhlambela)
Wamkelekile kwisikhokelo sokuyila sobungakanani beshawa kubandakanya ubukhulu bemigumbi yokuhlambela, kunye neendidi zeeshawari kunye neebhafu. Indawo yokuhlambela yeyona ndawo ibaluleke kakhulu kwigumbi lokuhlambela kwaye xa kufikwa kutyalomali kuphuculo lweshawari entsha okanye ukulungisa ibhafu yakho; into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele kukwazi ubungakanani beshawa.
Ubungakanani obuqhelekileyo bokuhlamba
Ukuhlamba okumile okwesikwere
Ukuhlamba kunye neTub Combo
Yima wedwa Indawo yokuhlambela
Shower ezivalelayo Ubungakanani
Shower Cabin Ubungakanani
Ubungakanani bokuhlamba umphunga
Ubungakanani beSiseko seShower
Ubungakanani beTub Shower Size
Ukuma kwamaTub Shower Sizes
Alcove Tub Ukuhlamba Ubungakanani
Yehla kubungakanani bebhafu yokuhlambela
Ubungakanani beBhafu yeKona
Ukuhamba-ngaphakathi kubungakanani bebhafu
ADA Shower Ubungakanani
Ubungakanani boMntu oHlambayo
Shower Door Ubungakanani
Umtyibilizi weSango kunye neBypass Door Style
Ihenjiswe kunye nePivot Shower Door
Ubungakanani obuPhezulu bePaneli yokuBuya ecaleni
Umyinge weShower Curtain Size
Ukuhlamba Liner Ubungakanani
Ukuhlamba Ubungakanani bebhentshi
Ukugcinwa kweeshelfu kunye neNiches
Ukuhlamba ubungakanani beNiche
Eli nqaku lijolise ekuncedeni ukuba uthathe isigqibo malunga nobungakanani be ishawa yangasese unokuhlala kwikhaya lakho, kunye nokunye ukulungiswa kunye neenkcukacha onokufuna ukuzibandakanya.
Eyona yunithi yokuhlamba incinci incinci kwaye ine-32 x 32 intshi; kwaye unganyuka uye kuma-34 x 34 intshi kunye no-36 x 36 intshi.
Ezi ntlobo zeshawari zinokufakwa kwiikona zebhafu yakho kunye nakwigumbi lokuhlambela elingenayo indawo eyoneleyo, le shawa imile isikwere nayo ingafakwa eludongeni olunye.
Ubungakanani obuqhelekileyo kunye nobukhulu obuqhelekileyo beshawa kunye ne-tub combo ngama-60 x 30 x 72 intshi; oku kubandakanya imilinganiselo ye-porcelain tub kunye nendawo ejikeleze isitya sebhafu efunekayo xa kufakwa ibhafu kunye neshawa combo.
Ngokwesiqhelo isitya sokuhlambela kunye nesitya sokuhlambela sifakelwe indawo ebiyelweyo yokuhlambela iglasi ngenkangeleko yanamhlanje necocekileyo. Ukuphakama kweglasi yokuhlamba iglasi kuyahluka ukusuka kwii-intshi ezingama-79, ii-intshi ezingama-81 kunye nee-intshi ezingama-87.
Ubungakanani bevenkile yokuma yodwa, ihlala ihluka ngokusekwe kwisithuba esabelwe kwigumbi lokuhlambela lendawo yokuhlambela. Ubungakanani bemigangatho yeshawa ngaphandle kwebhafu zii-intshi ezingama-48 x 36. Obu bungakanani bunendawo encinci apho ikunika khona indawo yokuhamba.
Ubungakanani obumiselweyo beeNdawo zokuHamba eziShumi:
5 x 27.5 intshi
5 x 31.5 intshi
5 x 35.5 intshi
4 x 39.4 intshi
Qaphela: Zimbini izinto onokukhetha kuzo ukuphakama kwezi Quadrant Shower Enclosures: i-intshi ezingama-73 kunye nee-intshi ezingama-77
Ubungakanani obuqhelekileyo beOffset Quadrant Shower ebiyelweyo:
4 x 31.5 intshi
3 x 31.5 intshi
Ukuphakama: i-intshi ezingama-77
Ubungakanani obuqhelekileyo beNeo Angle okanye iPentagon Shower ebiyelweyo:
5 x 35.5 intshi x 77 intshi (ukuphakama)
Ubungakanani obuqhelekileyo bendawo yokuShower ebiyelweyo:
Qaphela: Zimbini izinto onokukhetha kuzo ukuphakama kwezi Quadrant Shower Enclosures: i-intshi ezingama-73 kunye nee-intshi ezingama-77.
Ubungakanani obuqhelekileyo boXande oluHlanganisiweyo lokuShona:
Ukuphakama: ii-intshi ezingama-77 kuzo zombini ubukhulu obuqhelekileyo
Ubungakanani obuqhelekileyo beShower Cubicles:
Kukho ukuphakama okungafaniyo onokukhetha kuko: ii-intshi ezingama-79 | Iintshi ezingama-81 | Iintshi eziyi-83 kunye nee-intshi ezingama-87
Olunye ubungakanani beetafile zokuhlamba:
5 x 37.5 intshi
3 x 35.5 intshi
Ukuphakama kokwahluka: i-intshi ezingama-85 kunye nee-intshi ezingama-87
Ubungakanani obuqhelekileyo beQuadrant Steam Shower:
I-38 x 38 intshi
I-39 x 39 intshi
3 x 47.3 intshi
2 x 51.2 intshi
I-59 x 59 intshi
Ukuphakama: ii-intshi ezingama-73 kunye nee-intshi ezingama-77
Ubungakanani obuqhelekileyo besiKwere okanye oSixande esiShushu seShower:
I-59 x 33.5 intshi
67 x 33.5 intshi
67 x 35.5 intshi
Ubungakanani obuqhelekileyo be-Offset Quadrant Steam Shower:
Ukuphakama: 83 intshi | Ii-intshi ezingama-84 kunye nee-intshi ezingama-87
Ubungakanani obuqhelekileyo boMbane oShushu oShushu wokuBiyela:
Ukuphakama: i-intshi ezingama-89
Ubungakanani obuqhelekileyo beStam Shower Combo:
3 x 33.5 intshi
Ukuphakama: 83 intshi | Ii-intshi ezingama-84 | 85 intshi | Iintshi ezingama-87 kunye nee-intshi ezingama-89
Funda ngakumbi malunga nezibonelelo ezahlukeneyo ze Iishawari zomphunga Apha.
cream cream nelokhwe yomtshato
Qaphela: Owona mmandla uqhelekileyo wokuvalelwa kweglasi zii-intshi ezi-3/8, olu hlobo lweglasi luhlala ixesha elide, lukhuselekile, luyabukeka kodwa luyabiza kakhulu. Kukho amaxesha apho ukucaciswa kweglasi kunokuba yi-intshi ye-intshi yeglasi.
Isiseko seshawa sihlala sibizwa ngokuba yipani yokuhlamba kodwa ngokwenene ayithethi into efanayo.
Isiseko seshawa sisakhiwo esifakwe phantsi kweshawa ngokwaso; sisakhiwo esenziwe ngekhonkrithi ethe tyaba kancinci ukuvumela amanzi ukuba ahambe kakuhle ukuba aye emanzini.
Kwisiseko esisezantsi umjelo ubekwe embindini okanye kumngxunya wokuhambisa amanzi nge-offset.
Isiseko seshawa esomeleleyo sinokwenziwa ngemabhile yendalo okanye ephucukileyo, ithayile ebekwe phezu kwesiseko sodaka, i-acrylic, i-fiberglass; Inokude yenziwe ngeentlobo ngeentlobo zesinyithi ezinje ngentsimbi ebunjiweyo okanye ubhedu ezihlala ixesha elide kakhulu kwaye ziyinto entle kakhulu yoyilo.
Iziseko ezisemgangathweni zihlala zimile kwesikwere okanye uxande olususela kuma-32 x 32 intshi ukuya kuma-60 x 42 intshi.
Kwimvula yamakhoneni, ubungakanani beepane zesiseko se-neo-angle ukusuka kuma-intshi angama-36 ukuya kuma-intshi angama-60 ububanzi.
Iziseko zesiko ezakhelwe-ngaphakathi kwaye zakhiwa ngenwebu engenamanzi yenze uku-odola ubungakanani.
Zininzi ubukhulu obahlukeneyo xa kuziwa hamba kwiishawa kuba ixhomekeke kwindawo ekhoyo kwigumbi lakho lokuhlambela kunye neemfuno zakho zokuhlamba.
Ukuhamba kwimvula kufuneka kungabi ngaphantsi kobuncinane beesentimitha ezingama-32 ubude x 32 intshi ububanzi.
Ubukhulu obuqhelekileyo bokuhamba okuqhelekileyo kwisitya zii-intshi ezingama-34 x 34 intshi, ii-intshi ezingama-36 x 36 intshi nee-intshi ezingama-42 x 36 intshi; obu bungakanani, ngokuqinisekileyo buyahluka ngokuxhomekeka kubungakanani kwigumbi lokuhlambela.
Ukuhamba ngokukhululekileyo kubukhulu beeshawa kuya kuba nobukhulu obuphakathi kwee-intshi ezingama-48 x 36 intshi kwaye uye kuma-intshi angama-48 x 48 intshi ukunika igumbi elongezelelweyo.
Ukuhamba kakhulu kwishawa kunokufikelela kwii-intshi ezingama-60 x 36 intshi kwaye unokufumana isitulo sokuhlamba. Ukuphakama kweshawa kuyahluka ngokuxhomekeka kubude bendlu yekhaya lakho; kodwa ubukhulu becala ukuphakama kweshawa kufuneka kube zii-8 iinyawo.
Olunye uhambo lokuhamba ngobume beshawa zezi zilandelayo:
I-intshi ezingama-60 x 48 intshi x 96 intshi (ukuphakama)
I-intshi ezingama-66 x 66 intshi x 90 intshi (ukuphakama)
I-intshi ezingama-54 x 35 intshi x 89 intshi (ukuphakama)
I-intshi ezingama-71 x 47 intshi x 88 intshi (ukuphakama)
I-intshi ezingama-42 x 42 intshi x 82 intshi (ukuphakama)
Ngokubanzi, udonga oluqhelekileyo kwibhafu yodonga luya kuba nobukhulu be-intshi ezingama-60 ubude kunye nee-intshi ezingama-30 ukuya kuma-32 ububanzi.
I-intshi ezingama-60 ubude x 30 intshi ububanzi
I-intshi ezingama-55 ubude x 27 intshi ububanzi
72 intshi ubude x 32 intshi ububanzi
Ukuphakama: 24 intshi
Iibhafu zokuma simahla njengeebhafu ezingadityaniswanga okanye ezingadibananga nakweziphi na iindonga okanye imiphezulu yegumbi lokuhlambela. Olu hlobo lokuhlambela lufuna indawo enkulu yokuhlambela ukulungiselela ubungakanani kunye nobunzima bebhafu.
I-intshi ezingama-45 ubude x 30 intshi ububanzi
I-intshi ezingama-72 ubude x 42 intshi ububanzi
Ukuphakama: 15 intshi
Iibhafu zokuhlambela ze-Alcove zihlala zifakelwa ngaphakathi kwendlu ebiyelweyo emithathu, ihlala ibenza ukuba babeyilungele ingcamango yoyilo lokudibanisa ishawa.
Ukuphakama: ii-intshi ezingama-14 ukuya kwezi-20
Ukulahla kwiibhafu kufana kakhulu neebhafu zokuhlambela eziqhelekileyo kwaye zihlala zifakwe ziqhagamshelwe eludongeni kwigumbi lakho lokuhlambela, njengebhafu yohlobo lwebhafu; okanye inokufakwa kwindawo evulekileyo ukuyifaka kwipeninsula embindini wegumbi lokuhlambela.
Ngaphantsi kweNtaba yeBhafini
Ngaphantsi kweebhafu zebhafu zihambelana kakhulu nokwehla kwebhafu; umahluko kuphela kukuba umphetho wayo ugqunywe kumgangatho omncinci owenziwe ngamatye okanye ngetayile. Eli litye okanye ithayile liza kunceda ukufihla ityhubhu yetafile ngexesha lofakelo.
I-intshi ezingama-60 x 60 intshi
Ii-intshi ezingama-48 x 48 intshi
72 intshi x 72 intshi
Ukuphakama: 22 intshi
Ezi bath bath zekona zihlala zithathwa njengeebhafu zokuhombisa ezihlala zifakwe kwigumbi lokuhlambela kuba ezi tubs zilungele uxinzelelo, ukucamngca kunye nokuthambisa imisipha.
I-intshi ezingama-48 ubude x 28 intshi ububanzi
I-intshi ezingama-60 ubude x 36 intshi ububanzi
Ukuhamba-kwiibhafu zokuhlambela lukhetho olukhulu kwabo banemicimbi yokuhamba okanye kubahlali abaphezulu.
Olu hlobo lwebhafu lufuna ukufakelwa ziingcali kuba ibhafu ifuna ukufakelwa ngaphezulu kunebhafu eqhelekileyo. Ukuhamba ebhafini kunezibambo ezizodwa zokubambelela kunye nokubambelela kufuneka kunyuswe ukunceda ekugcineni intloko yabasebenzisi ngaphezulu kwamanzi kunye nokunceda abasebenzisi abangena nabaphuma ebhafini.
Umthetho waseMelika okhubazekileyo (ADA) ubeke imigaqo yezona ndawo zincinci zeshawari zabantu abakhubazekileyo.
Izikhokelo ze-ADA zobungakanani beshawa:
Ukutshintshwa kweADA Shower Izikhokelo ze -ADA zifuna ukuba imvula kufuneka ibe ngaphakathi ngaphakathi kwe-36 intshi x 36 intshi. Imibundu kwishawari yokutshintshela kufuneka ibe nobuninzi obuphezulu bee-½ intshi ngaphezulu komgangatho wegumbi lokuhlambela ogqityiweyo.
Kufuneka kubekho ukuvulwa kobuncinci be-intshi ezingama-36 ekungeneni kweshawa. Izitulo ezimilise okwe-L kufuneka zingabekwa ngaphezulu kwesithathu ukusuka ekungeneni ngaphambili kwaye ukubamba udonga ngasemva kufanele kube zi-intshi ezili-18 ukusuka kudonga lolawulo. Kufuneka kubekho ii-intshi ezingama-36 (ububanzi) x 48 intshi (ubude) ubuncinci bokucoca eludongeni lolawulo.
I-ADA yokuQengqeleka kuShower -Iyilelwe njengesihlalo esinamavili kwisitya esinamavili, izikhokelo ze-ADA zifuna ubuncinci ngaphakathi kwishower ye-60 intshi x 30 intshi.
Oku kungavumela indawo eyaneleyo kwisitulo esinamavili okanye isitulo sokuhlambela. Imibundu kwishawari yokutshintshela kufuneka ibe nobuninzi obuphezulu bee-½ intshi ngaphezulu komgangatho wegumbi lokuhlambela ogqityiweyo. Kuya kubakho ukuvulwa kobuncinci be-intshi ezingama-60 ukusuka phezulu kuye ezantsi.
Izitulo ezimilise okwe-L kufuneka zingabekwa ngaphezulu kwesithathu ukusuka ekungeneni ngaphambili kwaye ukubamba udonga ngasemva kufanele kube zi-intshi ezili-18 ukusuka kudonga lolawulo. Kufuneka kubekho ii-intshi ezingama-30 (ububanzi) x 60 intshi (ubude) ubuncinci bokucoca kufutshane nokuvula.
Xa uyila ishawa kabini, gcinani engqondweni ukuba ububanzi bubaluleke ngakumbi njengoko indawo yeshawari kufuneka ibanzi ngokwaneleyo ukuze ikwazi ukuhlalisa abantu ababini abahlambayo.
Kuya kufuneka ukuba ujonge ubume bendawo yakho yokuhlamba kwaye ukuba ukhetha ishawari evaliweyo okanye evulekileyo. Konke malunga nokwenza ukuba isibini sonwabe ngakumbi kwaye sibe nendawo eyaneleyo yokuhamba ngokukhululekileyo.
Ezimbini zeyona nto ixhaphakileyo yabantu ababini (kabini) ubukhulu beeshawari zii-3 iinyawo x 5 iinyawo kunye neenyawo ezi-4 ngeenyawo ezi-6; okanye ezinye zinobukhulu obukhulu ngokuxhomekeke kwindawo ekhoyo. Indawo yokuthambisa egcina amanzi kwishawari, kufuneka ubuncinci ibe zii-intshi ezi-2 ngentla komsele ongaphezulu kodwa ungabi ngaphezulu kwe-intshi ezi-9.
Ubungakanani beminyango yokuhlamba kuxhomekeke kuhlobo lweshawa oyifunayo kwindawo yakho yokuhlambela kwaye ngumbandela wokuzikhethela.
Uninzi lweengcango zokuhlamba eziqhelekileyo ziphakathi kwama-intshi angama-22 ukuya kuma-36 ububanzi kwaye ukuphakama okuphakathi komnyango wokuhlamba zii-intshi ezingama-72. Ukuba ububanzi bomnyango weshawari bungaphezulu kweesentimitha ezingama-36, kufuneka ukuba kufakelwe iphaneli eyongezelelweyo ukuxhasa ubunzima bomnyango.
Ububanzi obuqhelekileyo beengcango zokuhlamba zi:
Ukuhlamba okuMgangatho kunye neTub Combo: Ububanzi bee-intshi ezingama-60
Ukuhlamba okumileyo wedwa: 54-60 intshi ububanzi
Ukuhlamba okuzimeleyo okumeleyo Ii-intshi ezingama-42 ukuya kuma-48
Obunye Ubuso obuqhelekileyo bokuhlamba iingcango:
Ubungakanani obukhulu: ii-intshi ezingama-60
Okwenziweyo Kuvulwa ngomnyango: 21 ¼ i-intshi ububanzi ukuya kuma-25 3/8 intshi ububanzi
Olona hlobo luhle lomnyango weshawa kunye ne-tub combo, ishawa yekona kunye nemvula ye-alcove
Inamacala amabini okanye nangaphezulu
Olu hlobo lomnyango lutyibilika okanye luqengqelekela phezulu kunye / okanye ezantsi ezinyuswe iingoma.
Umgangatho weSilayidi oTyibilikayo oMnyama:
56 5/8 intshi ukuya ku-59 5/8 intshi ububanzi
44 5/8 intshi ukuya 47 5/8 intshi ububanzi
Ubungakanani obukhulu: ii-intshi ezingama-48
Okwenziweyo Ukuvulwa komnyango: 26 ½ intshi ububanzi
Ingafakwa ngeehenjisi ezizodwa okanye ezibini ezivumela umnyango ukuba uvule ngaphakathi nangaphandle ujike i-180 °
Unokuqhotyoshelwa kwicala elinye lomnyango kwiphaneli emiselweyo okanye ngokuthe ngqo ubekwe eludongeni lweshawari.
Kunconywe ishawa yekona emxinwa kunye neshawari ezimeleyo
Ubungakanani obuPhezulu bePivot Shower Door
I-39 1/8 intshi ukuya kwi-44 intshi ububanzi
27 5/16 intshi ukuya 31 1/8 intshi ububanzi
43 1/8 intshi ukuya kuma-48 intshi ububanzi
Iintshi ezingama-34 ukuya kuma-35 intshi ububanzi
Iintshi ezingama-29 ukuya kwezingama-30 ububanzi
Iintshi ezingama-31 ukuya kuma-32 intshi ububanzi
Ndwendwela igalari yethu ye iintlobo ezahlukeneyo zeminyango yeshawari Apha.
Kukho imigangatho emithathu ubukhulu belengalenga lokuhlamba enobukhulu obulingene umndilili webhafu yokuhlambela
70 intshi x 70 intshi
70 intshi x 72 intshi
I-intshi ezingama-70 x x intshi ezingama-84 (ikhethini elide elongezelelweyo)
I-intshi ezingama-72 (ububanzi) x 96 intshi (ubude) Umgangatho wekhethini yokuhlamba isilingi
I-intshi ezingama-84 (ububanzi) x 74 intshi (ubude) Enye ikhethini yokuhlamba ibhafu
Ikhethini yeshawari enendawo efanelekileyo yokugubungela kufuneka ibe ziisentimitha ezilishumi elinambini ububanzi kunebhafu yonke.
Amakhethini eeshawa amade anokuza nawo ngobukhulu: ii-intshi ezingama-72 x 84 intshi kunye nee-intshi ezingama-78 x 78 intshi. Kwizitishi zeshawari, ikhethini elincinci lifika kuluhlu lwe-intshi ezingama-36 x 54 intshi ukuya kuma-54 ″ x 78 ″.
Ukuze ufumane ubude obufanelekileyo bamakhethini akho eshawa, linganisa ubude ukusuka kwintonga yekhethini ukuya emgangathweni uze uthabathe ii-intshi ezimbini ukusuka kubude obupheleleyo.
I-intshi ezingama-54 x 78 intshi
70 intshi x 84 intshi (ubude obude)
I-intshi ezingama-72 x 84 intshi (ubude obude)
I-intshi ezingama-144 x ii-intshi ezingama-72 (ububanzi obungaphezulu)
Iibhentshi zokuhlamba zinokufakwa xa kuyilwa iishawari. Benza uphawu olukhulu nolusebenzayo kwigumbi lokuhlambela. Isihlalo sebhentshi kufuneka sikhululeke ngokwaneleyo kwaye kwangaxeshanye sishiye indawo eyaneleyo yendawo yokuhlamba.
Ukuphakama kwebhentshi lokuhlamba kufuneka kube yi-intshi e-1 ngaphantsi kunomva wamadolo akho. I-ADA icebisa i-intshi ye-17 ukuya kwi-intshi ye-19 ukusuka emhlabeni yeyona nto iphambili yebhentshi yokuhlamba.
I-ADA ikwacebisa ubunzulu kufuneka bubuncinci be-intshi ezili-15 ukuya kwi-intshi ezili-16 ukusuka eludongeni lokuhlala, kwaye isihlalo esingasemva esihlalweni kufuneka sibe nobuninzi bee-intshi ezimbini.
ilokhwe elula yomtshato omhlophe
Isihlalo esimile okwe-L sidla ngokufuna i-intshi ezili-14 ukuya kwezili-intshi ezili-15 ubunzulu besihlalo. Isitulo seenyawo zeshawari sinokuba zii-intshi ezili-10 kuye kwezili-13 intshi ubuncinci bomhlaba ukuya kuthi ga kwi-intshi ezili-15.
Ukugcinwa kweeshelfu kunye ne-niches yeyona mpendulo ilungileyo kuloo ndawo yokugcina yongezelelekileyo onokuyifuna kwindawo yakho yeshawari, kuba ilungile, iyasebenza kwaye ayithathi ndawo kwisitya sakho. Indawo elungileyo ye-niche yeshawari iseludongeni olungqamene okanye kufutshane nentloko yeshawa.
I-intshi ezili-12 (ububanzi) x 24 intshi (ukuphakama) kunye neshelufu phakathi kwe-intshi ezili-12 ukuphakama yeyona ngcebiso ilungileyo
Shower niche depth: 2.5 intshi ubuncinci ukuya kwi-3.5 intshi ubuninzi
Isimo esinconywayo esincomekayo se-niche kufuneka sibe sesifubeni kwinqanaba lemehlo; malunga nee-intshi ezingama-48 ukuya kuma-60 intshi ukuphakama. I-bath niche kufuneka ibekwe ezantsi, oku kuthetha ukuyibeka nje kancinci kunebhafu.
Olunye uhlobo lobungakanani beshawari:
6 intshi x 6 intshi
12 intshi x 12 intshi
I-intshi ezingama-24 x 12 intshi (Eyona ncomo ingcono)
35 intshi x 12 intshi
47 intshi x 12 intshi
Xa uhlaziya igumbi lakho lokuhlambela, kuhlala kusebenza ukuba ishawa yakho ifakelwe apho kukho ishawa yakho yangoku; endaweni yokuhambisa indawo yakho yeshawari. Uzakufuna ikhontraktha elungileyo kakhulu kunye nomfaki womnyango weshawa ukuze ufezekise iziphumo ezilungileyo.
I-bouquets yomtshato oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe
Isipho seminyaka esi-2 kuye
ububanzi bokomisa iwasher
ukuba uthini kwikhadi lokubulela
Umama womakoti uhlaziyo lwemitshato